Shiinaha Geedi socodka shubista soo saaraha iyo Alaab-qeybiye | Meesha
Geedi socodka shubay dhinta waa habka ay u samaysan yihiin zinc, copper, aluminium, magnesium, lead, tin iyo lead alloys daasado alloys ah iyo iskudarkooda oo lagu dhalaaliyo heerkulka sare laguna durayo daloolka caaryada, ka dibna la qaboojiyo cadaadis si loo helo qaybo.
Heerkulka shaqada ee biraha aan birta ahayn ee loo shubay ayaa aad uga hooseeya kan birta loo shubay, iyo qalabka macdanta u dhiganta iyo shuruudaha habraaca waa sahlan yihiin, waana yar yihiin. Wax soo saarka shubista Die wuxuu heli karaa tayada dusha sare ee wanaagsan iyo saxsanaanta cabir ahaan, gaar ahaan ku habboon soosaarka heerka ballaaran ee qaybaha yar yar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, kaas oo siiya qayb wanaagsan oo dhinaca qalabka elektarooniga ah, qalabka korontada, gawaarida, aaladaha caafimaadka, qalabka iyo dharka. qalab. Alloys kala bir ah oo kala duwan ayaa leh dabeecad aad u kala duwan oo ku jirta geedi socodka shubay dhinta. Qeybtooda ugu yar iyo qoraalka ugu yar waa kala duwan yihiin, heerkulka dhibcaha dhalaalaya waa kala duwan yihiin, dusha sare ayaa ku kala duwan, Marka waxaa ugu wanaagsan in laga qeybgeliyo kooxdeena injineerada goor hore inta lagu gudajiro nidaamka qaabeynta si looga faa'iideysto khibradeena naqshadeynta wax soo saarka.
Waxaa jira shan arrimood oo muhiim u ah geedi socodka shubay dhinta birta:
1.Die wax shubay;
Noocyada Geeddi-socodka Daaridda Dhimashada;
3.Die mashiinka shubay;
4.Die caaryada ridaya;
5.Post Processing iyo Dhameystirka Qaybo ridaya Die
Geedi socodka shubay dhintawaa hab lagu mideynayo cadaadiska, xawaaraha iyo waqtiga adoo adeegsanaya saddexda cunsur ee mashiinka, caaryada iyo isku-darka. Shaqaynta biraha kulul, jiritaanka cadaadisku waa astaamaha ugu muhiimsan ee geedi socodka shubista dhinaceeda taas oo ka duwan hababka kale ee loo rido. Cadaadiska cadaadiska waa qaab khaas ah oo khafiif ah oo aan yareyn oo aan goyn karin, taas oo si dhakhso leh ugu horumarisay tikniyoolajiyadda farsamada birta casriga ah. Waa geedi socod lagu buuxinayo caaryada biraha la shubay cadaadiska sare iyo xawaaraha sare, iyo sameynta tuubada iyadoo la adeegsanayo crystallization iyo adkeynta cadaadiska sare. Cadaadiska sare iyo xawaaraha sare waa astaamaha ugu muhiimsan ee tuurista dhinta. Cadaadiska sida caadiga ah loo isticmaalo waa tobanaan megapascals, xawaaraha buuxinta (xawaaraha albaabka gudaha) wuxuu ku saabsan yahay 16-80m / s, waqtiga buuxinta dareeraha biraha ee daloolka caaryada waa mid aad u gaaban, qiyaastii 0.01-0.2s. Tuurista Dhimashada Birtu waa geedi socod loo shubay biro kaas oo lagu gartaa in lagu qasbo biraha la shubay cadaadis sare oo saaraya caaryada. Daloolka caaryada iyo udub-dhexaadka waxaa lagu sameeyay iyadoo la adeegsanayo dhinta bir adag oo qaabeysan loo farsameeyay isla markaana u shaqeynaya si la mid ah caaryada muditaanka inta lagu gudajiro howsha. Waxay kuxirantahay nooca birta la tuurayo, makiinad qol-kulul ama qabow ayaa loo isticmaalaa.
Qalabka loo yaqaan 'cast casting'MESTECH waxay bixisaa qaybo dhinta oo loo yaqaan' zinc alloy ', aluminium alloy iyo magnesium alloy. Sababta oo ah seddexdan shay ayaa ah kuwa inta badan loo isticmaalo walxaha dahaarka ah ee dhinta.
Sifooyinka daawaha zinc:
--- Awood sare iyo adkaansho
--- Dhaqdhaqaaqa korantada oo fiican
--- Kuleylka kuleylka sareeya
--- Qalab cayriin oo qiimo jaban
--- Saxnaan cabbir sare iyo xasillooni
--- Awooda khafiifka ah ee fiican
--- Awood u lahaanshaha qaabka qabow, kaas oo fududeynaya ku biirista
--- Astaamaha dhameystirka tayada sare
--- U adkaysiga daxalka-dib-u-habeyn buuxda
Astaamaha Aluminium Aluminium:
--- heerkulka shaqeynaya ee sareeya
--- U adkaysiga daxalka
--- Awood aad u wanaagsan iyo adkaansho
--- Qalafsanaan wanaagsan iyo isugeyn miisaan-iyo-miisaan
--- EMI iyo RFI guryaha u fiican
--- Ku-xirnaanta kuleylka wanaagsan
--- Qabashada korantada sare
--- Astaamaha dhameystirka wanaagsan
--- Dib-u-cusboonaysiin buuxda
3. Calaamadaha Magnesium Alloy:
--- Tabinta sare; koronto, iyo kuleyl
--- Waxay celisaa heerkulka hawlgalka ee sarreeya
--- Awooda khafiifka ah ee khaaska ah
--- U adkaysiga daxalka deegaanka
1 Habka loo shubay Hot-Chamber-ka
Qolka-kuleylka kuleylka ayaa loo shubay, mararka qaarkoodna loo yaqaan "gooseneck casting", ayaa ah kan ugu caansan labada geedi socod ee shubista. Nidaamkan, qolka silsiladda ee habka cirbadeynta ayaa gebi ahaanba lagu shubey qubeyska birta dhalaalay. Nidaamka quudinta biraha gooseneck wuxuu biraha dhalaalayaa u jiidayaa daloolka dhimirka.
In kasta oo si toos ah loogu dhex shubo qubeyska la shubay waxay u oggolaaneysaa cirbadeyn deg deg ah oo ku habboon, waxay sidoo kale keentaa u nuglaanta daxalka. Xaqiiqdaas awgeed, habka shubista ee qolka kulul ayaa ugu habboon codsiyada adeegsada biraha leh dhibco hooseeya iyo dheecaan sare. Biraha wanaagsan ee habka ridaya qolka kulul waxaa ka mid ah rasaasta, magnesium, zinc iyo naxaas.
2 The Cold-Chamber Geedi socodka shubay dhinta
The habka-casting dhiman qabow-qol waa mid aad u la mid ah casting dhinta-qol-kulul. Naqshadeynta oo diiradda saareysa yareynta mashiinka qashinku halkii uu ka ahaan lahaa wax-soo-saarka wax-soo-saarka, birta dhalaalay ayaa si otomaatig ah- ama gacanta loogu dhajiyay nidaamka duritaanka. Tani waxay tirtiraysaa lagama maarmaanka u ah habka duritaanka in lagu dhex shubo qubeyska birta dhalaalay.
Codsiyada aad u jilicsan ee loogu talagalay naqshadeynta naqshadeynta qolka kuleylka kuleylka ah, habka qolka-qabow wuxuu noqon karaa bedel aad u fiican. Codsiyadaas waxaa ka mid ah shubka biraha leh heerkulka dhalaalaya ee sarreeya, sida aluminium iyo aluminium.
3 Nidaamka Daarista Dhimashada ee Cadaadiska Hoose
Daarista dhinta cadaadiska-hoose waa nidaam ugu habboon qaybaha aluminium ee isku dhejisan wareegga wareegga. Taayirada gawaarida, tusaale ahaan, badanaa waxaa lagu farsameeyaa shubista dhinta cadaadiska hooseeya. Nidaamka noocan ah, caaryada waxay ku taal meel ka korraysa qubeyska birta dhalaalay waxayna ku xiran tahay tuubbo kacsan. Marka qolka la cadaadiyo (badiyaa inta udhaxeysa 20 iyo 100kPa), birta ayaa kor loo jiidayaa oo la galayaa caaryada. Ka takhalusida dadka quudiya noocyada noocan ah ee geedi socodka shubista ayaa keenta wax soo saarka shubista sare.
4 Habka loo shubay Vacuum Die
Vacuum casting pressure (VPC) waa geedi socod shubista dhimashadu cusub tahay oo keenta xoog kor u kacsan iyo dabacsanaan yar. Nidaamkani wuxuu la mid yahay shubista dhinta ee cadaadiska hoose, marka laga reebo meelaha ay ka sameysan yihiin caaryada dhinta iyo qubeyska birta la dhalaaliyay. Qolka silsiladdu wuxuu noqon karaa mid faaruq ah, kaasoo ku qasbaya biraha la shubay godka caaryada. Naqshadeyntaani waxay yareysaa qaska waxayna xaddideysaa xaddiga waxyaabaha gaaska ku jira. Vacuum shubay dhinta gaar ahaan faa'iido u leh codsiyada loogu talagalay daaweynta kuleylka dambe-shubay.
5 Geeddi-socodka Nidaamka Daarista Dhimista
Tuujinta Tuujinta ayaa loo abuuray sidii xal lagu shaqeyn karo oo loogu talagalay tuurista biraha iyo aaladaha leh dareere hooseeya. Nidaamkan, biraha la shubay ayaa buuxinaya dhimasho furan, ka dibna tuujinaysa xirida, kuna qasbaya birta qaybaha nasashada ee wax taaj oo kale ah. Nidaamka tuujinta tuujinta ayaa keena alaab aad u cufan waana geedi socod dhammaystiran oo ku-daweynta-ku-xigta-xiga ah. Nidaamku badanaa wuxuu la xiriiraa aluminium la shubay, waxaana loo adeegsadaa codsiyada ku baaqaya xoojinta fiber.
6 Habka loo shubay Semi-Adag
Semi-adag shubay dhinta, mararka qaarkood loo yaqaan Thixoforming, waa nidaam kale oo keena ugu yaraan porosity iyo cufnaanta ugu badan. Mashiinku wuxuu jarjaraa qaybta shaqada ee yar yar, ka dibna waa la kululeeyaa. Marka birtu gaarto marxaladda kala-guurka ee u dhexeysa adag iyo dareeraha, taasoo ka dhalanaysa xoogaa jilicsan oo jilicsan, gacmo tallaal ah ayaa ku qasbaya godka caaryada, halkaasoo ay ku adkaato. Faa'iidada tan ayaa ah hagaajinta saxda ah. Biraha non-ferrous sida magnesium daawaha iyo aluminium daawaha waxaa inta badan loo isticmaalaa habka ridaya dhinta semi-adag.
Noocyada Geeddi-socodka Daarista Dhimashada
Dhammaan noocyada habka loo shubay dhinta waxaa loogu talagalay isla ujeeddada maanka ku haysa-tuur caaryar adoo isticmaalaya biro la shubay oo la isku duro. Iyada oo ku xidhan nooca birta dhalaalay, joomatari qayb iyo cabbirka qayb ka mid ah, hababka kala shubista ee u dhinta kala duwan ayaa u keeni kara natiijooyin ka sarreeya hababka kale. Labada nooc ee waaweyn ee geedi socodka ridaya dhinta waa qol-kulul iyo shuban dhinta qol-qabow. Kala duwanaanshaha labadan nooc ee tuurista dhimashada waxaa ka mid ah:
Cadaadis hooseeya ayaa u dhinta shubista
Vacuum shubay dhiman
Tuuji tuurista dhinta
Semi-adag shubay dhinta
1 qolka cadaadiska kulul mashiinka shubay dhinto
Marka loo eego qaab dhismeedka iyo qaabeynta qolka, waxaa loo qaybin karaa qaabab jiif iyo toosan ah. Mashiinka lagu shubo birta la shubay wuxuu ku xiran yahay mashiinka qolka cadaadiska kulul, iyo farsamada piston-ka ee cadaadiska Haydarooliga birta ee galaya caaryada waxaa lagu rakibay mashiinka. Qaar ka mid ah qasabadaha kulul ee riixaya waxay isticmaalaan hawo isdabamarin si ay si toos ah ugu duraan cadaadiska haydarka birta caaryada iyagoo aan lahayn qalab piston ah.
Qolka Hot mashiinka shubay dhiman
Qolka kulul ee riixaya mashiinka ridaya dhinta waxaa badanaa loo isticmaalaa daawaha dhinta-ridaya oo leh dhibic yar oo dhalaasho, sida zinc, Magnesium iyo tin.
2 Qolka cadaadiska qabow wuxuu dhintaa mashiinka ridaya
Kala dhalaalida birta banaanka mashiinka ka dibna ku darida biraha dareeraha ah qolka isku soo xoqista ee qaaddo qaadada waxaa loo qaybin karaa qol qumman oo toosan mashiinka ridaya iyo qolka qabow ee jiifka dhinta mashiinka ridaya sida ku cad jihada dhaqdhaqaaqa ee piston riixa
Birta dareeraha ah waxaa laga qaadaa foornada qolka saxafada qabow ee tooska ah ee mashiinka ridaya waxaana lagu shubay qolka cadaadiska. Birta ayaa ah haydarooliga lagu riixay caaryada bistoolada isku-dhafan, biraha dheeraadka ahna waxaa riixaya bistoolad kale.
Qolka Cold dhinto mashiinka shubay
Qolka qabow ee jiifku mashiinka ridaya wuxuu la mid yahay midka taagan, laakiin dhaqdhaqaaqa pistonku waa mid jiif ah. Inta badan mashiinnada tuurista dhimashadu waa kuwo jiifa. Mashiinnada tuubbada dhinta ee qaboojiyaha ayaa dhinta-tuuri kara biraha dhibicdu ku badan tahay ama si fudud u ogsijiin kara biraha, sida aluminium, macdanta naxaasta ah, iwm.
3.Die mashiinka shubay
Mashiinka shubay Die waxaa loo isticmaalaa mashiinka ridaya cadaadis. Waxaa ka mid ah laba nooc oo qolka kulul riixaya mashiinka ridaya dhinta iyo mashiinka shubay dhinta qolka qabow. Qolka riixaya qabow ee mashiinka ridaya wuxuu u qaybsan yahay laba nooc: toosan iyo toosan. Birta la shubay ayaa lagu durayaa caaryada mashiinka wax lagu shubo ee dhinta iyadoo la raacayo ficilka cadaadiska qaboojinta iyo sameynta, iyo birta adag ee adag ayaa la heli karaa ka dib marka caaryada la furo.
4.Die caaryada shubay
Qaabab kala duwan, xaaladaha shaqada ee dhimashada dhimashadu way ka dhib badan tahay. Dareemida Die waa in la sameeyo biraha la shubay oo ka buuxsamaya daloolka caarada ee cadaadiska sare iyo xawaaraha sare, iyo la xiriirida biraha kulul si isdabajoog ah inta lagu jiro hawsha shaqada. Sidaa darteed, dhinto caaryada loo shubay loo baahan yahay in ay leeyihiin iska caabin ah daal heerkulka sare, conductivity kaamerada iyo xirtaan iska caabin ah, iska caabin ah daxalka, adkeysiga saamaynta, engegnaantiinna cas, demoulding wanaagsan iyo wixii la mid ah. Sidaa darteed, tiknoolajiyada daaweynta dusha sare ee dhimashadu waxay u baahan tahay tiknoolajiyad sare.
Waxaan bixinaa inta badan howlaha boostada iyo dhammeystirka adeegyada loogu talagalay qaybaha jiifka ee ka imanaya wada-hawlgalayaashayada xulashada:
Mashiinka CNC - toosan, jiifsan, rog, 5-dhidib
EMI - gaashaan RFI
Dahaadhay - chrom, naxaas, zinc, nikkel, daasad, dahab
Anodizing, Dahaarka korantada, Chromating / Chromating-ka
Daaweynta kuleylka, Passivation, Tpping
Habka Farshaxanka Gudaha
Golaha Farsamada Fudud, oo ay ku jiraan gelinta iyo helikabtarrada la geliyo, O-ring, gasket
Goynta Laser iyo Xardho
Dahaarka Korantada & Baaritaanka Xarka
Hore: Nooca caaga ah
Xiga: Qaybaha ridaya dhinta